UGU DAMBAYN: Heshiiskii Neymar JR Ee Barcelona Oo Ugu Dambayn U Muuqda Mid La Isku Fahmay & Wakhtiga La Dhammayn Karo Oo La Ogaaday. - Gool24.Net
Heshiiska Neymar JR uu kaga soo wareegayo dhinaca kooxdiisa Paris Saint-Germain isla markaana uu ugu biirayo Barcelona ayaa ahaa mid mudo dheer soo socday haatan balse waxa uu ugu dambayn noqon karaa mid la isku fahmo.
Neymar ayaa lagu sifeeyay mid ay ka go’antahay inuu PSG ku qasbo inay iska fasaxdo isaga oo qalbiga gashaday ku laabashada kooxdiisii hore ee Barca kaddib laba xilli ciyaareed oo uu kasoo maqnaa.
Marka laga yimaado xaqiiqada ah in Barcelona ay horeba suuqa kharash weyn ugu bixisay isla markaana ay £108 Milyan kula saxeexatay Antoine Greizmann haddana waxay xiisaynaysaa ka shaqaynta wado Neymar lagu soo celinayo.
SIDOO KALE AKHRISO: Lionel Messi Oo Ku Guuleystay Abaalmarinta Goolkii Ugu Fiicnaa Xilli Ciyaareedka Ee Yurub (Daawo Goolka)
Dhawaan ayay ahayd markii Neymar uu kusoo laabtay tababarka kooxdiisa waxaana uu kulan la qaatay agaasimaha ciyaaraha ee Paris ee Leonardo isaga oo u sheegay rabitaankiisa ah inuu kooxda ka tago.
Intaa kaddib madaxda sarre ee kooxdaas ayaa la sheegay inay isku dayeen inay ku qanciyaan inuu kooxda kusii negaado balse wax natiijo ah oo qumay ayay gabi ahaanba ka waayeen.
Kaddib Neymar ayaa saxeexiisa loo bandhigay kooxo ay kamid ahaayeen Manchester United, Real Madrid, Bayern Munich iyo Juventus waxaana xataa soo baxay warar sheegaya in aabaha Neymar uu la kulmay Juventus.
Si kastaba, Haatan wargeyska kasoo baxa Spain ee Sport ayaa sheegaya in madaxda kooxaha Barcelona iyo Paris Saint-Germain ay ku rajo weyn yihiin inay heshiiskiisa dhameeyaan toddobaadkan gudihiisa iyo maalmaha soo socda.
Ivan Rakitic, Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Nelson Semedo, Malcom iyo Samuel Umtiti ayaa dhammaantood ah xiddigo ay Barcelona u bandhigtay PSG isla markaana ay u sheegtay inay laba ka xushaan lacagna qaataan si ay Neymar uga helaan.